Mabhuku akanakisa ezvinyorwa zvemuAfrica | Zvazvino Zvinyorwa
Tsika yemuromo yakabvumidza vanhu vakasiyana siyana vepasi kuti vaparadzire dzidziso huru uye vakaratidza kukosha kweimwe tsika munhoroondo yese. Muchiitiko chekondinendi senge Africa, madzinza akasiyana siyana akaita hunyanzvi iyi imwe yemhando yavo yekutaurirana kudzamara kusvika kwekukoloniwa pamwe nekuiswa kwemasimba ekunze kwakapa mhosva tsika dzavo. Neraki, mireniyumu nyowani yakabvumidza mafungu evanyori vemu Africa kuzivisa pasi rose nhaka yekondinendi yakasakadzwa sezvo izere nenyaya uye nhetembo. Unoda kuziva anotevera akanakisa mabhuku eAfrica zvinyorwa?
1 Zvese zvinowira pasi, naChinua Achebe
2 Americanah, naChimamanda Ngozi Adichie
3 Tsamba yangu refu kwazvo, kubva kuMariama Bâ
4 Nhamo, naJM Coetzee
5 Tsanga yegorosi, kubva kuna Ngugi wa Thiong'o
6 Kurara Pasi, naMia Couto
7 Allah haasungwe naAhmadou Kourouma
8 Moto wemavambo, naEmmanuel Dongala
Kana paine bhuku rinotsanangura sevamwe vashoma matambudziko makuru akaunzwa necolonization ku Africa, izvo zvese zvinowira pasi. Magna basa re Munyori wekuNigeria Chinua Achebe, avo vakaita sevamwe vazhinji munyika yake vakaurayiwa kwekuyedza kwekutanga kuevhangeri yeAnglican muzana ramakore rechimakumi maviri, bhuku iri rakaburitswa muna 1958 rinotaura nyaya yaOkonkwo, murwi ane simba kwazvo weUmuofia, vanhu vekunyepedzera vetsika dzevaIgbo avo vavhangeri vekutanga vanosvika nechinangwa chekuchinja tsika uye nekupa chiratidzo chavo chechokwadi. Yakataurwa senge nyaya, uye yakakosha kuti uzvi nyurure mumitemo nemagariro ekona ino yakasarudzika ye Africa, Todo se dismorona inofanirwa kuverengerwa kune avo vese vanoda kuongorora nhoroondo yekondinendi hombe pasirese.
Americanah, naChimamanda Ngozi Adichie
Americanah, ndizvo zvinodaidzwa nevaNige munhu akambomira kubva kunyika yeWest Africa kuenda kuUnited States ndokudzoka. Izwi ratingagone kurevawo Chimamanda Ngozi Adichie, zvimwe munyori ane mukurumbira kwazvo muAfrica nhasi. Achiziva zvechikadzi zvinodzivirira zino nembambo mukutaura kwake, nyaya, uye kokonodzano, Ngozi akaita iyi nhoroondo kuve yakabudirira kwazvo muUnited States nekutaura nyaya yemukadzi wechidiki uye nhamo dzake kufambira mberi mushure mekuenda kune rimwe divi re dziva. Rakadhindwa muna 2013, Americanah yakagamuchira pakati pevamwe iyo National Book Circle Mubairo, chimwe chemibairo yekunyora yakakurumbira muUnited States.
Tsamba yangu refu kwazvo, kubva kuMariama Bâ
Kusiyana nenyika dzekumadokero, barika richiri kuzivikanwa munzvimbo zhinji dze Africa. Tsika inoshora vakadzi kuisirwa pasi nevarume vavo uye nekuona mikana yavo yekufambira mberi munzvimbo dzakadai Senegal, nyika ine chokwadi chiri kutaurwa mubhuku rino na Mariama Bâ, munyori akamirira kusvikira ave nemakore makumi mashanu nerimwe chete kuti ataure chokwadi chake. Ivo protagonists veYangu Longest Tsamba vakadzi vaviri: Aïssatou, uyo anosarudza kusiya murume wake achienda kunze kwenyika, uye Ramatoulaye, uyo kunyangwe achigara muSenegal, anotanga kuratidza shanduko yechinzvimbo ichienderana nemhepo yeshanduko iyo yakaunza rusununguko rwe iyi nyika yeWest Africa muna 1960.
Nhamo, naJM Coetzee
El kurambana kuti South Africa yakatambura kusvika 1994 yakanga iri imwe yemasara ekupedzisira ekoloni yakanga ichirova Africa kwemazana emakore. Uye mumwe wevanyori anga achinyatsoziva maitiro ekubata chokwadi cheiyo episode uye mhedzisiro yazvo yave Coetzee, Mubayiro weNobel muMabhuku kuti mune ino "Nhamo" inoteedzera nyaya inotinyudza mukati megomba retsime rizere nezvakavanzika. Zvinoshungurudza, nyaya yemupurofesa wekoreji David Lurie uye hukama hwake nemwanasikana wake Lucy anoteedzera rwendo kuburikidza neyakaora, yeSouth Africa yemazuva ese iyo inonyengedza vaverengi vane hushingi.
Tsanga yegorosi, kubva kuna Ngugi wa Thiong'o
Kufuridzirwa nebhuku rekutanga raakambovhura, iro Bhaibheri, Munyori anonyanya kuzivikanwa kuKenya inoratidzwa muZviyo zvegorosi, zita rinobva mundima ye Tsamba yekutanga kuenda kuvaKorinde, nhoroondo yevanhu uye nhoroondo yavo mukati memazuva mana pamberi paUhuru, zita raanozivikanwa naro Kuzvimirira kweKenya yakasvika muna Zvita 12, 1963. Yakaburitswa muna 1967, A Grain of Wheat nderimwe remabasa epamberi aThiong'o, akasungwa panguva ye kusimudzira Kikuyu mutauro theatre kumaruwa enyika yako uye imwe yeiyo Vasingagumi vanoshuvira weNobel Prize muMabhuku izvo zvinoramba zvichimurwisa.
Kurara Pasi, naMia Couto
Inofungidzirwa seimwe ye Iwo akanakisa eanovhero eAfrica akambo, Kurara Pasi pano inova nyaya isina tsarukano pamusoro pehondo yevagari vemo kuMozambique muma80s kuburikidza nemaziso eharahwa Tuahir nemukomana Muidinga, mavara maviri akavanzwa mubhazi rakapunzika uko kwavanowana mabhuku ekunyorera umo mumwe wevatakurwi akanyora hupenyu hwake. . Chinyorwa cheKouto, munyori mureza mukunzwisisa nhoroondo yerudzi rweMozambiki yakawanikwa muna 1498 nemaPutukezi Vasco de Gama uye inofungidzirwa nhasi seimwe yevasina kusimukira pasi rose.
Allah haasungwe naAhmadou Kourouma
Kubva kuIvory Coast, Kourouma yaifungidzirwa nevazhinji kuve iyo francophone vhezheni yaChinua Achebe. Achiziva matambudziko epasi rake uye kondinendi, munyori, uyo akatanga kunyora aine makore makumi mana, akasiya semuenzaniso wakanaka kwazvo wechiratidzo chake Allah haasungirwe, basa rinotipa nhoroondo yakashata yeBirahima, nherera yakatumirwa kuLiberia neSierra Leone semwana musoja. Rimwe remabhuku akanakisa mumabhuku eAfrica kana zvasvika pakusvika pahuhwana hwakashata hwezviuru zvevana zvinoshandiswa munyika mbiri dzinoonekwa naKourouma se "chipfambi".
Moto wemavambo, naEmmanuel Dongala
Akazvarwa mu1941 muRepublic of the Congo, Emmanuel Dongala ndiye munyori anomiririra zvakanyanya kune iyo yave iri imwe yenyika dzakakundwa zvakanyanya nekoloni yekune dzimwe nyika. Moto wemavambo unoteerera mibvunzo yakawanda yem protagonist werino, Mandala Mankunku, mukati mezana ramakore umo kukoroni, kutonga kwaMarx uye kuzvimirira vanoruka nhoroondo yerudzi runonetsa.
Ndeapi ari maonero ako mabhuku akanakisa ezvinyorwa zvemuAfrica?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku akanakisa ezvinyorwa zvemuAfrica